Shiinaha Neck oo duudduuban warshad xirmooyin baraf ah iyo soosaarayaasha | Huanyi
Duub duub baakad baraf ah
Shahaadada: SGS MSDS FDA CE REACH
Cabir: 35 * 16cm
Midabka: Midab gaar ah: guduud, cagaar, casaan
Logo: Waa la habeyn karaa
Kartida Bixinta: 200000 Piece / Pieces pe month
Dhererka kala duwan ee aad dooratay
Shahaadada: SGS MSDS FDA CE GAAR
Cabir:35 * 16cm
Calaamadda: Waad habeyn kartaa
Kartida Bixinta:200000 Piece / Cadad bishii
Dhererka kala duwan ee aad dooratay Duubku wuxuu ku sii jirayaa meesha isagoo socda, taagan, ama fadhiya. Kulul ama qabow Qoorta iyo Garabka ayaa ka caawin kara inaad nasato, dib u cusbooneysiiso oo aad soo celiso jirkaaga iyo naftaada.
Waqtiga Sample: 3-10days, fadlan u soo dir emayl khidmadda qiimaha dhoofinta saamiga.
Wax soosaarka: 15-20 maalmood ka dib sambalka la ansixiyay.
Midab caadi ah: 15-30 maalmood kadib helitaanka 30% deebaaji ah.
Naqshadeynta daabacaadda: 15-35 maalmood kadib helitaanka 30% deebaaji ah.
Si amar deg deg ah ,: Waa ka dhaqso badan tahay, fadlan dir emayl si aad ula xaajoodo.
Sidee loo sameeyaa amar?
2.Macmiilku wuxuu sameeyaa 30% dhigaal ah ama furan LC kadib markuu helo Pl.
3.Macmiilku wuu ansixiyaa muunadaada pp, oo waxaan helaa warbixinta baaritaanka haddii ay muhiim tahay.
Waqtiga wax soo saarka
5. Diyaarso shixnad.
6.Sababulaha ayaa diyaarinaya dukumiintiyada lagama maarmaanka ah una diraya nuqul ka mid ah dukumiintiyadan .. Saamaynta macaamilka ee bixinta macaamiisha ..
7.Supplier-ku wuxuu diraa dukumiintiyada asalka ah ama telex wuxuu siidaayaa alaabada.
Dammaanad 8.Quality for 60days ka dib shixnad.
Hore: Baakad baraf leh oo suun leh
Xiga: Xidhmada barafka baabasiirka
Baakad Baraf Neck Iyo Garabka Ugu Fiican
Duub deji qoorta